चितवनमा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि…. – Kavrepati
Home / समाचार / चितवनमा इतिहाँसमै सवैभन्दा वढि….
admin November 28, 2021	समाचार Leaveacomment 114 Views
नेकपा एमालेको महाधिवेशनका कारण चितवनमा ग’र्भनिरो’धक अस्थायी साधनको बिक्री बढेको छ । बजार क्षेत्रका औ’षधी पसल, अस्पताल रोडका नीजि अस्पतालहरुमा अस्थायी साधन खरिदविक्रि वढेको वताईएको छ। अप्रत्यासित रुपमा अस्धायी साधनको माग वढेपछि औ’ष’धी ब्यवसायीहरु आस्चर्यमा परेका छन् ।
यसअघि समान्य रुपमा माग हुने अस्थायी साधनको माग वढेपछि औ’ष’धी पसलदेखि पान पसल, केहि होटलको काउन्टर तथा किराना पसलमा पनि ग’र्भनिरो’धक साधन पाउन थालेको छ। विशेष गरी क’ण्ड’म, ग’र्भ नि’रो’ध’क च’क्कीहरु पि’ल्स, ए’स्ट्रो’जे’न, मि’निपि’ल तथा केही सु’ईहरुको माग बढेको औ’षधी ब्यवसायीहरु वताउँछन् ।
जथाभावी क’ण्ड’म तथा पि’ल्स वि’क्रि हुन थाले’पछि औ’षधी पसले भने रु’ष्ट छन्। जथाभावी अ’स्थायी साधन विक्रि हुँदा समेत नियन्त्रण गर्ने निकायले वे’वास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
एमालेको अधिवेशनका कारण अहिले चितवनका सवै होटलहरु खचाखच भरिएका छन् । जसमा प्राय जोड़ी, प्रेमी र धेरै जसो दम्पत्तिहरु नै सहभागी छन् । त्यसैले पनि अ’स्थायी सा’धनको माग वढेको हुन सक्ने औ’षधी ब्यवसायीहरुको अनुमान छ।
एक ब्यवसायीका अनुसार चितवनमा इतिहाँसमै पहिलो पटक यति धेरै अ’स्थायी साधनको माग भएको हो। अ’स्थायी सा’धनमा पनि क’ण्डम’को माग अ’धिक छ। ग’र्भ रो’क्ने र एचआईभीलगायतका यौ’न प्र’सारित सं’क्रमणह’रुवाट पनि वचाउने हुनाले पनि क’ण्ड’मको माग वढेको हुनसकने उनी वताउँछन् । (नेपाल आज बाट साभार गरिएको )
यो पनि : भीम रावल गलाउने यस्तो छ ओली रणनीति, बन्दसत्रमा तनाव दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा दाबी गरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल शनिबार दिनभरजस्तो भनिरहेका थिए कि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी छैन । बाहिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेका बेला रावल अध्यक्ष कुनै छलफल भएको जानकारी नभएको र उम्मदेवारी कुनै हालतमा फिर्ता नलिने उल्लेख गरिरहेका थिए ।
Previous मुकुन्द घिमिरेले गरे ‘इन्गेजमेन्ट’ , को हुन् युवती ?
Next यिनै हुन् आज भएको दुर्घटनामा अकालमै ज्यान गुमाएका बाबु छोरा